Maraykanka oo cabsi iyo walwal ka muujiyay suurtogalnimada qaraxyo Al-shabaab ka fuliso wadamada geeska Africa. – Radio Daljir
Maraykanka oo cabsi iyo walwal ka muujiyay suurtogalnimada qaraxyo Al-shabaab ka fuliso wadamada geeska Africa.
Washington, Oct, 30 ? Xukuumadda Maykanka ay wal-wal iyo walaac xooggan ka muujiyay suurto-galnimada qaraxyo iyo weeraro ay kooxda Al-shabaab ka fuliso wadamada ku yaalla geeska Africa.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga Maraykanka ee Bantigonka ayaa wakaalada AFP waxay u sheegeen, inay jiraan qorshayaal la xiriira isku-dayo ay Al-shabaab ku doonayso qaraxyo iyo weeraro ay ka gaysto wadamada Kenya, Ethiopia, Burundi, iyo Uganda.
Cabsida iyo wal-welka ay iftiiminayso xukuumadda Maraykanku ayaa kusoo aadaya xilli 7-kii hore dalka Ethiopia ay wasaaradda difaaca maraykanku ka samaysatay saldhig cusub oo laga maamuli doono diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee aan cidna wadin, kuwaasoo la tilmaamay inay la dagaalami doonaan argagixisada geeska Africa.